अाज चन्द्रमा यस्तो देखिँदैछ ! - Deshko News Deshko News अाज चन्द्रमा यस्तो देखिँदैछ ! - Deshko News
अाज चन्द्रमा यस्तो देखिँदैछ !
अंग्रेजीमा एउटा उखान छ, ‘वान्स इन अ ब्लु मुन।’ दुर्लभ कुराको अर्थ लगाउन सो उखान प्रयोग हुँदै आएको छ। के साँच्चै नीलो चन्द्रमा दुर्लभ हुन्छ? उखानले संकेत गरेजस्तो दुर्लभ मानिएको नीलो चन्द्रमा शुक्रबार देखिँदैछ।
गुरु पूर्णिको अवसर पारेर देखिन लागेको यो चन्द्रमा दुई–अढाइ वर्षमा देखिने गर्छ। सूर्यको प्रकाश चन्द्रमा पर्दा यो चम्किने गर्छ। यसरी चम्किँदा पहेँलो वा सेतो देखिने अवस्थालाई चलचल्तीको भाषामा ‘ब्लुमुन’ अर्थात् नीलो चन्द्रमा भनिने गरेको छ। खगोल वैज्ञानिकहरु बोलचालको भाषामा भनिए जस्तो यो दुर्लभ भने मान्दैनन्।
नीलो चन्द्रमा देखिने समयमा एउटै महिनामा दुईवटा पूर्णिमा परेका हुन्छन्। जुलाइ २ मा पूर्णिमा परेकोमा शुक्रबार ३१ मा नीलो चन्द्रमा देखिन लागेको हो। पछिल्लो पटक ब्लुमुन सन् २०१२ को अगस्ट ३१ मा देखिएको थियो। आगामी नीलो चन्द्रमा २०१८ जनवरी ३१ मा देखिनेछ।
बकिङ्घम दरबारले राजकुमार ह्यारी र मेगनले अब शाही उपाधि प्रयोग नगर्ने र उनीहरूले नागरिकको करबाट
एजेन्सी , माघ ४ निर्भया बलात्कार–हत्याकाण्डको आरोपमा हिरासतमा रहेका मुकेशकुमार सिंहले राष्ट्रपतिसमक्ष जीवन रक्षाको माग